Wararkii Ugu dambeeyey Qaraxyo iyo Dagaal Toos ah oo ka dhacay Agagaarka VILLA SOMALIA – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaWararkii Ugu dambeeyey Qaraxyo iyo Dagaal Toos ah oo ka dhacay Agagaarka VILLA SOMALIA
Wararkii Ugu dambeeyey Qaraxyo iyo Dagaal Toos ah oo ka dhacay Agagaarka VILLA SOMALIA
Laba qarax ayaa waxa ay goordhow ka dhaceyn Magalada Muqdisho kuwaas oo jugtooda laga malay qeybo badan oo ka mid ah Magalada Muqdisho, waxana qaraxyada xigay rasaas xooggan oo la isku ridayey.
Qarax koowaad oo ka dhacay Agagaarka taalada SYL oo aan ka fogeyn Madaxtooyada ayaa waxa ka hor la maqlay rasaas xooggan, waxana goobjoogayaal ay sheegeen in gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu xoog ku soo gudbay koontoroolka ciidamada, kadibna ay rasaaseeyen sidasina uu ku qarxay.
Waxaa daqiiqado ka dib xigay qarax kale oo jugtiisa laga maqlay Muqdisho, sidoo kale qaraxyo kale oo u muuqday bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa la maqlay.
Weli lama oga halka sida rasmiga ah weerarka loogu qaaday, waxana goobaha ay wax ka dhaceyn kusii qul qulaya gawaarida gurmadka deg dega ee Ambalaasta.
Ciidamo aad u farabadan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa goobta kusii qul qulaya, waxaana qaraxyadaas iyo weerarka uu kusoo aadayaa xilli Wadooyinka Muqdisho intooda badan ay Maanta xiran yihiin.
Maxaa ka cusub Qaraxyada iyo Weerarka ka dhacay Magaalada Muqdisho?